ပန်ဒိုရာ: My Last Minute
ဒီပို့စ်ကို တင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုနတ် တစ်ယောက် နတ္ထိရဲ့ နိဂုံး ဆိုတဲ့ပို့စ်ကို တင်နေတယ် ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေကြီး ကိုနတ်တစ်ယောက် ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာနဲ့ ဘလော့ဂ်လောကကို ပြန်လာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရုံသာ တတ်နိုင်ပါတော့တယ်။
ကိုနတ်ကို အားလုံးက သတိရနေကြမှာပါ။
လူတောပဲ.. သဘေထားလည်းကောင်းတယ်.. သံယောဖဉ်လည်းကြီးပ..
မပန်.. Paint ဆွဲထားတာ?? မိုက်တယ်.. =)
မမ က ပုံလည်းအဆွဲကောင်းတယ်နော်...
ပန်ပန်ရှင်းပြတော့မှပဲ ပုံကပိုပြီး အသက်ဝင်လာသလိုလို … ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိလာသလိုလို … ထင်မိတယ်။ ပန်ပန် မပြောရင် သိမှာမဟုတ်ဘူး။ မသိတော့ နားမလည်ဘူး။ နားမလည်တော့ မခံစားတတ်ဘူးပေါ့။ ခုတော့ ခံစားလို့ ရသွားပြီ။
ဖန်တီးသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကြည့်ရှုသူရဲ့ ခံစားချက် တထပ်ထဲ ကျဖို့က ခဲယဉ်းသား။ တခါတလေတော့လည်း ခုလို ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်သလို … တခါတခါမှာလည်း ဘုမသိ ဘမသိ ခံစားချက်က တမျိုးအရသာ။
အင်း ရှင်းရတယ် မမေရေ တော်ကြာ နှောင်းလူတွေ သို့လော သို့လော ဖြစ်တော့ ပန်းချီကားက တန်ဖိုးပိုတက်နေဦးမယ်
ပန်းချီ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ပန်ဒိုရာလိုပဲ ၀ါသနာပါလို့ လျှောက်ဆွဲနေတာပါ။ မတတ်ပါဘူး။ သင်လည်း မသင်ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော် Paint ထဲမှာ ဆွဲရင် Line Tool နဲ့ပဲ ဆွဲတတ်တယ်။ Pencil Tool ကို လက်ငြိမ်အောင် မကိုင်တတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ပုံလည်း Line Tool နဲ့ပဲ ဆွဲထားတာပါ။ အဲဒီအကြောင်း ပို့စ်လေး ထပ်တင်မလို့ လောလောဆယ် စာမူတွေ လိုက်ဖတ်နေလို့ဗျာ။ ပန်းချီတွေ ဆွဲဦးနော် လာအားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။